मन्त्री बिष्टले ‘गोपी’ ट्रेलरमा किन चासो देखाए ? « Drishti News
मन्त्री बिष्टले ‘गोपी’ ट्रेलरमा किन चासो देखाए ?
Published On :9January, 2019
काठमाडौं, २५ पुस । नेपाली फिल्म ‘गोपी’माथि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले चासो देखाएका छन् । ‘गोपी’ फिल्मको टिमसँग भेटघाट गर्दै उनले फिल्मप्रति चासो देखाएका हुन् ।
सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्य कक्षमा मंगलबार फिल्मका कलाकार निर्माता तथा निर्देशकलाई भेटेर मन्त्री विष्टले फिल्मको ट्रेलरले आफूलाई उत्सुक बनाएकाले बताएका थिउ । उनले फिल्मका मुख्य कलाकार विपिन कार्की, सुरक्षा पन्तसँगै निर्देशक दीपेन्द्र लामा, निर्माता मणिकर्ण केसी, कार्यकारी निर्माता श्रीधर पौडेल र लेखक सामीप्यराज तिमल्सेनालाई भेटेका थिए ।
भेटमा मन्त्री विष्टले ‘चाह्यो भने देशमै पनि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने फिल्मको विषय रहेछ । अहिले सरकारले पनि स्वरोजगार र स्वावलम्बनको कुरालाई प्राथमितामा राखेको छ । सरकारको धारणालाई फिल्मले समेटेको देख्दाएकदमै खुशीलाग्यो,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘फिल्मप्रतिश्रम मन्त्रालय र व्यक्तिगत रुपमा मेरो पनि नैतिक समर्थन र ऐक्यवद्धता छ ।’
मन्त्री विष्टले आफूले यदाकदा नेपालीफिल्म हेर्न गरेको भएपनिमौलिकफिल्मकमै बन्ने गरेको कुरासँगआफू अवगतभएको बताउँदै नीतिगत रुपमै मौलिक फिल्मलाई प्रवर्द्धनगर्ने कुरा सरकारसँग राख्ने उनले आश्वासन दिए ।
निर्देशक दीपेन्द्र लामाले श्रममन्त्रीले फिल्मप्रति देखाएको चासोले आफू र आफ्नो टिमलाई हौसला मिलेको बताए । ‘विदेश नताकेर देशमै पसिना खन्याउने युवाहरुको ठूलो जमात छ, देशमा । त्यो समूहलाई फिल्मको माध्यमबाटै भएपनि हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले देशमै केहीगर्न खोज्ने युवाको कथाभन्ने प्रयास गरेका थियाँैं,’ लामाले भने, ‘हाम्रो काममा मन्त्रीको नजर परेकोमा हामीलाई हामी आफ्नो उद्देश्यमा धेरधोर भएपनि सफल भएको महसुस भएको छ ।’
दीपक मनाङ्गेद्वारा अनटाइटल फिल्म घोषणा
काठमाडौँ,, २ माघ । प्रदेश न ४ ‘ख’का प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद राजिव गुरुङ ‘दीपक
लिम्बू भाषामा लघुचलचित्र ‘निङ्वासुम’
काठमाडौं, २ माघ । गीतकार रीता फोम्बो ‘ठूली’को लघुचलचित्र ‘निङ्वासुम’ सार्वजनिक भएको छ । लामो
ओजस्वी र पुस्करलाई ‘टुरिजम कल्चर’ उपाधि
काठमाडौं, २ माघ । प्लानेट मल्टिमिडिया इन्टरनेशनलले काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रदेश नम्बर ३ स्तरिय ‘मिस
रंग पत्रकार भोला मरेको मान्छे बनेपछि…! (भिडियोसहित )
काठमाडौं, २ माघ । पछिल्लो केही समययता कलासम्बन्धी कलम चलाउने पत्रकारहरु अभिनय र निर्देशनमा पनि